Home News weeraradii Galkaacyo oo lasoo gabagabeeyay
weeraradii Galkaacyo oo lasoo gabagabeeyay
Ciidanka Galmudug ayaa soo Afjaray weerar Qaraxyo iyo toos ahaa oo saakay lagu qaaday xarunta Xerta Wadaadka Cabdiweli oo ku taalla Koonfurta Magaalada Gaalkacyo.
Ciidanka ayaa sidoo kale ku guuleystay in ay gacanta ku dhiggaan mid ka mid ah raggii galay xarunta Weerarka ka dib, waxaana hadda uu ku jira gacanta Ciidanka maamulka Galmudug.
Ku dhawaad 20 ruux oo uu ku jiro Sheekh Cabdiweli Cilmi Yare ayaa lagu dilay weerarkaasi sidda ay xaqiijiyeen Hay’addaha Ammaanka Galmudug.
Alshabaab ayaa sheegatay masuuliyadda qaraxa.
Sababta ay u beegsadeen waxay ku sheegeen inuu af lagaadeeyay nabi Maxamed NNKH horey ayay Al-Shabaab digniin ugu dirty.
Previous articleSoomaaliya oo ka qeeyb galeysa shirka dhaqaalaha badaha oo Dalka Kenya ka furmi doona
Next articleBeenta Wasiir Beyle waxay gaarsiisay in loo aqoonsado cadowga koowaad ee Qaranka.
Sargaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo Muqdisho la keenay!